Mugabe - I was ordained by God to rule Zimbabwe forever, I am not stepping down. - Zimbabwe Today
Home/News/Mugabe – I was ordained by God to rule Zimbabwe forever, I am not stepping down.
Mugabe – I was ordained by God to rule Zimbabwe forever, I am not stepping down.
President Robert Mugabe says civil unrest in Zimbabwe won’t force him step down or call early elections as protestors clash with police in Harare.
President Mugabe made these remarks today when he addressed a Zanu PF Central Committee meeting in the city, which focused on the current civil unrest in the country and economic problems facing Zimbabwe.
His remarks came at a time when members of Tajamuka-Sesijikile Campaign staged a peaceful demonstration in Harare, which was crushed by the police.
Previous Zimbabwe people are cowards – otherwise Mugabe wouldn’t be in power today #Tajamuka #ThisFlag
Next Zimbabwe Opposition Party MDC-T bails out broke Tsvangirai
Nyagura Wants Case Referred to Concourt